माघे संक्रान्तिको अवसरमा रिडी जाने हैन त ? यस वर्ष महोत्सव पनि हुँदैछ – Palpa Samachar
By palpa samachar	 On Jan 4, 2020
चुरामणी तिमिल्सिना । (रुरुधाम) गुल्मी
रुरु क्षेत्र रिडीमा संचालन हुन गइरहेको दोस्रो रुरु महोत्सवको तयारी तीब्र रुपमा भइरहेको छ । यही पुस २९ गतेदेखी माघ ९ गते सम्म हुने महोत्सवका तयारीहरु चलिरहेको मुल आयोजक समितिले जनाएको छ ।
गुल्मी उद्योग बाणिज्य संघ रिडी शाखा गुल्मी र रुरु फ्रेन्डस कलब रिडीको आयोजनामा महोसब संचालन हुन लागेको हो । रुरु धाममा हरेक बर्ष माघे संक्रान्तिको अवसरमा मेला लाग्दै आएको भएपनि यस बर्ष महोत्सवकै रुपमा अगाडि सारिएको मूल आयोजक समितिका संयोजक सुबर्ण लाल कक्षपतिले बताए ।
मेलामा खास गरि राडी पाखी चार पाटे कम्मल ओखर, घाजी, डाला, सुपा बासबाट अन्य सामाग्री गुल्मेली गुड खुदो सुन्तला टिमुर गिठी लगायतका काठबाट बनेका ठेका ठेकी विविध प्रकारका पुजा सामाग्री लघुवेली फलामका तावा हसिया जिरा धनिया कटुस अम्लिसाका कुचा पाल्पाली ढाका बाट बनेका बिबिध प्रकारका सामाग्रीको बढि बिक्री हुनेछ ।
गुल्मी उद्योग बाणिज्य संघ रिडी शाखाको भबन निर्माण सहयोगार्थ यो महोत्सव गर्न लागिएको महोत्सव मूल आयोजक समितिका सचिव हुमनाथ ज्ञवालीले बताए । महोत्सवको सफलताको लागि बिभिन्न उपसमितिहरु समेत बनाइएको छ ।
मूल आयोजक समितिको सहसयोजकमा सोभित थापा, निर्देशकमा हिमाल श्रेष्ठ, सचिवमा हुमनाथ ज्ञवाली सहसचिवमा सचिब राजेन्द्र ज .ब .रा . लेखा तथा आर्थिक समितिमा नबराज बि .क . प्रायोजक सम्पर्क तथा कलाकार जिम्मेवारी ठाकुर श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ ।
मञ्च व्यवस्थापन तथा स्थानिय कलाकारको रुपमा आयोजकले बिक्रम रायमाझीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । स्टल निर्माणमा उजिर खान, पिउने पानी तथा सौचालय तर्फ गणेश कुमार श्रेष्ठ मेला सुरक्षा तर्फ सुरज गुरुङ, अतिथी स्वागत तथा आवास तर्फ जीवन कुमार कसजु, स्यम्सेबक तर्फ नरेन्द्र रेश्मीलाई चुनिएको छ । मेलालाइ आर्कषक बनाउन रण बहादुर रानाको नेतृत्वमा बाजा गाजा तथा झाकी परिचालन गरिने आयोजक समितिले जनाएको छ । त्यस्तै ब्यानर परिचालन आर्थिक अनुगमनमा चाम बहादुर गाहालाई समितिले चयन गरेको छ ।
अतिथी तथा प्रायोजकहरुलाई मायाको चिनो प्रदान गर्नको लागि राजेश मान श्रेष्ठ, कृषि प्रदर्सनी को नेतृत्व किशोरकुमार श्रेष्ठ गर्नेछन् । कार्यक्रम परिसरमा सिसि केमरा समेत जडान गरिने कार्यक्रम निर्देशक हिमाल श्रेष्ठले बताए । जसका लागि बिक्रम पोखरेलले जिम्मेवारी पाएका छन् ।
कार्यक्रमाजनप्रतिनिधिको बाक्लो उपस्थिति हुने हुदा यस्को आसन ग्रहण को लागि माधब ज्ञवालीले सम्पुर्ण बेवस्था मिलाउने छन । महोत्सवलाई रमाइलो तथा विभिन्न तरिकाले चिनाउन लागि बिद्यालय स्तरीय नृत्य प्रतियोगिता समेत हुनेछ जस्को जिम्मेवारी बिनोद भारीले पाएका छन् ।
कार्यक्रम प्रचारप्रसार लागि मिडिया प्रमुखको रुपमा पत्रकार चुरामनी तिमिल्सिनाले जिम्मेवारी पाए्रका छन् । कार्यक्रममा विभिन्न धार्मिक प्रसतुती तथा सम्पर्क को लागि फर्सु पौडेल रहेका छन् । यसै गरि होटल तर्फ प्रेम प्रसाद भन्डारी टिकट तथा परिचय पत्र तर्फ चिरञ्जीवी ज्ञवाली शान्ति सुरक्षा तर्फ संकर भट्टराई यातायात तर्फ ज्ञानेन्द्र रावल सरसफाइ तथा पर्सु नेपाललाई जिम्मेवारी दिइएको छ । मेलालाइ आकर्षक तथा सुधार गर्नको लागि गर्नको लागि ओम प्रसाद अमात्यलाई चयन गरिएको छ । स्थल सजाउट प्रज्ञान कसजु गेट निर्माण को लागि देबिलाल पान्डे लाई समितिले जिम्मेवारी दिएको छ । यो महोत्सवमा करिब २ लाख ५० हजार भन्दा माथी संख्यामा दर्सकले मेला अबलोकन गर्ने रुरु गाउँ पालिका वार्ड १ का वार्ड अध्यक्ष रामलाल बिकले बताए ।
मेलामा कृषि तथा घरेलुु को प्रदर्सन एतिहासिक फोटो प्रदर्सनी बालबालिकालाई भुलाउने खेल झुला समेत रहनेछ । मेलालाइ भब्य रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि ३ दर्जन भन्दा माथी सहयोगी संघ सस्था हरुको भुमिका रहने छ । मेलामा दैनिक स्थानीय तथा राष्टिय कलाकारहरुको बेजोड प्रस्तुती रहनेछ ।